Dad Muddo Afduubnaa oo Maanta la sii daayay.
Dadkaan oo tiro ahaan gaaraya ilaa iyo 5 ruux ayaa dhawaan laga afduubtay Degaanka Goobo ee Hoostaga Degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan , kadib markii laga degsay gaari ay saarnaayeen oo ka yimid degmada Guriceel ee gobalka Galgaduud kuna wajahnaa degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa la sheegay in sababo la xiriira aanooyin qabiil ay dadkaais u afduubteen, kadib dilal ka dhacay wadada xiriirisa degmooyinka guriceel iyo Matabaan,hayeeshee ugu dambeyn Maanta dadkaasi la siidaayay, waxayna waydiisteen Madax Furasho.
« Maxkamada ciidamada oo Maanta xukun riday.
Qaramada Midoobey iyo Dowladda Soomaaliya oo ka wadahadlay Xoojinta Xariirka 2 dhinac. »